Waa maxay faraqa u dhexeeya anticyclone iyo duufaanka? | Saadaasha Shabakadda
Farqiga u dhexeeya anticyclone (A) iyo squall (B)
Duufaannada iyo anticyclones-ka waxaa loola jeedaa cadaadiska kala duwan ee jawiga ku jira. Cadaadiska Hawada waxaa lagu cabiraa millibars (mbar). Millibar wuxuu u dhigmaa kun meelood 1 baararka, baarkana wuxuu lamid yahay 1 jawi (ATM). Waa muhiim in la ogaado waxa loo yaqaan 'millibar', maxaa yeelay farqiga u dhexeeya ama ka yar ee millatariga ee gobol wuxuu abuuraa duufaanno iyo xinjirowga lidka ku ah.
Kahor intaadan guda gelin faahfaahinta, xinjirowga lidka ku ah iyo duufaannada ayaa si fudud loogu garan karaa khariidad iyadoo la tixgelinayo isobars. Haddii uu jiro cadaadis ka badan inta caadiga ah, tusaale ahaan 1024 mb, waa marka aan ka hadlayno xinjirowga lidka ku ah. Marka cadaadisku hooseeyo, tusaale ahaan 996 millibars, sida ay uga muuqato sawirka, waxaan ka hadalnaa duufaan. Halkan laga soo bilaabo, cimilada la xidhiidha cadaadiska kala duwan ayaa ka duwan.
Badanaa waxaan barbar dhigi karnaa waqtiga xasilloon, oo leh cir cad iyo Sun. Cadaadiskeedu waa qiyaastii 1016 millibars ama ka badan.
Hawada ku jirta anticyclone way ka xasilloon tahay hawada ku hareeraysan. Dhanka kale, hawadu waxay hoos uga degtaa jawiga, iyadoo soo saarta ifafaalo loo yaqaan "hoos u dhac". Kaabista sida oo kale waxay ka hortageysaa sameynta roobab. Qaabka ay hawadu u soo degto waxay ku kala duwan tahay hadba qaybta aan joogno. Qeybta Waqooyiga, waxay hoos ugu sii socotaa jihada saacadda. Iyo cirifka koonfureed, ka soo horjeedka.
Ka soo horjeedda anticyclone, waxay la xiriirtaa cimilada oo deggan, cirka daruuro iyo roob. Cadaadiskeedu wuxuu ka yaryahay 1016 millibars.
Jihada wareegga hawada ee duufaanka, oo xaaladdan kor u kacsan, waxay ku sameysaa jihada ka soo horjeedka anticyclone. Taasi waa, saacad ahaan dhinaca koonfureed iyo dhanka woqooyi ee dhanka woqooyi.
Waxay badanaa keenaan dabaylo, waxayna yareeyaan heerkulka, xagaaga iyo jiilaalka labadaba. Badanaa waxay dhacdaa sababo la xiriira soo gelitaanka falaadhaha qoraxda oo yar, maadaama daruuraha ay ka tarjumayaan iyaga oo ka celinaya inay maraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Waa maxay faraqa u dhexeeya anticyclone iyo duufaanka?